दक्षिणी सिरियामा द्वन्द्व जारी, विस्थापि हुने बढे ! - दक्षिणी सिरियामा द्वन्द्व जारी, विस्थापि हुने बढे !
दक्षिणी सिरियामा द्वन्द्व जारी, विस्थापि हुने बढे !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २१ असार, 08:31:55 AM
दमासकस । दक्षिणी सिरियाली क्षेत्रमा जारी रहेको द्वन्द्वका क्रममा करिब ३ लाख मानिस विस्थापित भएको समाचार छ । यस क्षेत्रबाट विस्थापित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको बताइएको छ । दुई हप्तायतादेखि सो क्षेत्रमा द्वन्द्व झन बढेको बताइएको छ ।
त्यहाँ आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व फेरि बल्झिएको हो । सो क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्रोहीको धरपकड रहेको अधिकारीहरुले बताएका थिए । झण्डै दुई हप्तादेखि भइरहेको क्रुरतापूर्वक हवाई तथा स्थलगत कारबाहीबाट स्थानीय बासिन्दा निकै त्रसित भएका छन् ।
सिरियाको गृहयुद्धमा अल कायदा र इस्लामिक स्टेट ९आइएस० समूहका आतङ्ककारीको घुसपैठ भएको छ । यसैकारण सिरियाको द्वन्द्वमा परी त्यतिधेरै मानिसको ज्यान गएको हो ।
उनले बुधबार विज्ञप्तिमार्फत सिरियामा भइरहेका सैन्य गतिविधि ‘तत्काल रोक्न’ आग्रह गरेको समाचारमा जनाइएको छ । यस क्षेत्रमा पछिल्ला केही दिन यता सरकारी फौजद्वारा विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा सुरक्षा कारबाहीलाई कडा पारिएको छ जसका कारण यहाँका करिब १०० सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् ।
यस घटनाबाट राष्ट्रसंघीय प्रमुख चिन्तित बनेको उनका प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिकले बताए । महासचिव गुथ्रेसले सुरक्षा कारबाही जारी रहेको दक्षिणपश्चिमी क्षेत्रलाई जोर्डन, रूस र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच द्वन्द्वरहित क्षेत्र बनाउन सहमति भएको ध्यानाकर्षण गराए । एजेन्सी
२०७५, २१ असार, 08:31:55 AM